China High Tensile Simba Nylon Thread Manufacturer Wholesale
Material:100% zvinhu zvenaironi
Products Feature: Nylon yakakwirira kutsungirira Kusona tsvimbo inonyanya kuumbwa naironi 6 uye naironi 6.6. Iine simba rakakwirira, hukuru hwekupfeka-resistant uye corrosion-resistance. Inogonawo kuchengetedza simba rakajairika munzvimbo dzakaoma uye dzakanyorova.
Naizvozvo, nylon tenacity yekusona shinda inoshandiswa zvakanyanya munenge chero chinhu chinoda kusimba uye kusimba, senge zvigadzirwa zvematehwe, fenicha, kunze uye mamwe minda.
Nei uchisarudza MH Nylon yakakwirira tenacity kushona tambo?
Iyo yakapfava kupedzisa ine yepamusoro yakaderera kukwesheni lubrication inoderedza mhedzisiro yetsono kupisa uye abrasion. Iyo ine inowirirana kusona kuumbwa uye kwakatsetseka musono kutaridzika.
35 80 100D 3 ≥2.0 18-28 9-12 65-80 Chiedza Chiremu
45 80 138D 3 ≥2.7 18-28 10-12 70-80 Chiedza Chiremu
70 60 210D 3 ≥4.2 19-28 14-19 90-100 Kurema kwepakati
90 60 280D 3 ≥5.6 20-30 18-19 110-120 Kurema kwepakati
135 40 420D 3 ≥8.4 24-32 18-21 110-130 Kurema kwepakati
210 30 630D 3 ≥12.5 25-32 21-23 130-160 Kurema Kurema
Usage: Iyo yakakwira tambo yekumisikidza inoiswa zvakanyanya kune musono shangu dzematehwe, shangu dzemitambo, mukwende, sofa, chigaro chemota uye elastic jira, senge zvipfeko zvekushambira, diving sutu ...